Tababare Antonio Conte oo ammaankiisa u qalqal galay & Booliska oo ilaalo ka haya afaafka Gurigiisa iyo Xerada Tababarka Kooxda Inter – Gool FM
(Milano) 16 Nof 2019. Sida wararku ay sheegayaan Macallinka Kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa ammaankiisa ay cabsi soo wajahaday, iyadoo Booliska ay ilaalo ka hayaan afaafka Gurigiisa iyo Xerada tababarka Kooxda.
Antonio Conte ayaa lagu soo warinayaa inuu u baahday inay difaacaan Booliska kaddib markii la soo gaarsiiyey ama loo soo diray Bashqad ay ku jirtay Rasaas iyo warqad hajabaad ah.
Sida ay warinayaan Wargeysyada dalka Talyaaniga ka soo baxa ee Corriere della Sera iyo Gazzetta dello Sport macallin Conte ayaa waxa uu helay Baqshad ay ku jiraan hanjabaadyo qarsoon oo aan la shaacin iyo rasaas.
Tani waa ficil caan ah oo cabsi gelin ah, iyadoo sidaan oo kale dhawaanahan rasaas loo diray siyaasiyiin kala duwan oo Talyaani ah.
Waxaa lagu soo waramayaa in baaritaan la furay haatan, Tababare Conte ayaana la siiyay booliis ilaalo ah oo macallinkan ku waardiyeeya afaafka hore ee Gurigiisa iyo xerada tababarka Kooxda Inter Milan.
Inkastoo laga yaabo inay arrintani tahay taageerayaal ku ciyaaraya macallinka reer Talyaani ayaa haddana ciidanka Booliska waxa ay u qaateen si dhab ah, waxaana haatan la bilaabay baaritaan rasmi ah oo arrintan lagu sameynayo.
Waxaa horay u jiray cabashooyin ka yimid Taageerayaasha kooxda Juventus kaddib markii tababarihii hore ee Bianconeri uu hoggaanka u qabtay kooxda ay xafiiltamaan ee Inter Milan.
Tan iyo markii uu ka tagay Magaalada Turin waxa uu Tababare Conte sidoo kale ka soo shaqeeyey xulka qaranka Talyaaniga iyo Kooxda reer England ee Chelsea.